AKHRISO+XOG: Maxaa ka soo baxay Kulankii Golaha Xukuumada PL, xili ay jiraan colaado ka taagan Tukaraq, Ciidamada oo fariin loo diray? – Puntlandtimes
AKHRISO+XOG: Maxaa ka soo baxay Kulankii Golaha Xukuumada PL, xili ay jiraan colaado ka taagan Tukaraq, Ciidamada oo fariin loo diray?
GAROOWE(P-TIMES)- Golaha Xukuumada ee Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen Aqalka Madaxtooyada PL ee Garoowe, waxay diiradda ku saareen arrimaha Ammaanka, Dhaqaalaha iyo wada shaqeynta u dhaxaysa Hay’addaha dawladda iyo dhinacyada kala duwan ee ay ka mid yihiin wakiilada caalamiga ah.
Golaha wasiiradda ayaa dhageystay warbixino kala duwan oo la xariira xaaladda dalka, gaar ahaana dhinacyada Ammaana, Dhaqaalaha iyo wada shaqeynta laamaha dawladda, waxaana wararku sheegayaan in aad looga wada hadlay arrimaha la xariira difaaca intii uu socday shirkan.
Warsaxaafadeed laga soo saaray shirka golaha wasiiradda oo warbaahinta la soo gaarsiiyey ayaa si kooban looga hadlay xaaladda Difaaca, waxaana bogaadin iyo hambalyo loo diray ciidamada Puntland ee ku howlan difaaca dalkooda, gaar ahaana gobalada Mudug & Barri oo la sheegay in wax badan laga qabtay todobaadkii lasoo dhaafay.
Warar hoose oo laga helay shirkan ayaa sheegaya in ay wasiiradda qaarkood aad uga hadleen qodobada ku saabsan arrimaha Tukaraq oo ay sheegeen in looga baahan yahay dawladdu in ay qaadato doorkeeda, ayna masuuliyad ka saaran tahay difaaca dalka.
Golaha ayaa hoosta ka xariiqay sidda ay waajib u tahay difaaca Xaduudaha Puntland, ayna dhawrayaan dastuurka iyo jiritaanka dalka oo ay masuuliyadaas leeyihiin laamaha Ammaanka oo ay garowsan yihiin, waxaana jiray guddi gaar ah oo horey loogu xilsaaray, kuwaas oo ku howlahan arrimaha la xariira.
Mid kamid ah wasiiradda oo ay la xariirtay Puntlandtimes.com ayuu ka gaabsaday ka hadlida arrimaha gabi ahaanba ku saabsan qodobada qarsoon ee shirka looga wada hadlay, gaar ahaana kuwa khuseeya ammaanka oo ay Tukaraq ugu horeyso iyo Xiisadda ka dhalatay Xeer ka soo baxay baarlamaanka Faderaalka oo shaqadii looga joojiyey shirkada DP WORLD oo gacanta ku haysa dekeda magaalada Boosaaso.
Saacadihii ugu dambeeyey xiisadaha colaadeed ee ka taagan jiidaha ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa kordhay, waxaana labada dhinacba ay u diyaar garoobeen dagaal buuxa oo ka dhexqarxa, kaas oo saameyntiisu tahay mid aan si deg deg ah ama si fudud uga baaqsan doonin mandiqada oo dhan.